Kushongedza maitiro - Bezzia | Bezzia
Izvo zvakasiyana pfungwa zviri munyika ye decor Ivo vanopindura kune akasiyana masitaera uye mafashoni enguva yega yega yatinorarama. KuBezzia isu tinovaziva kwazvo uye tinoda kuti tisapotse chero yenyaya dzichangoburwa kubva muchikamu chiri kufamba nguva dzose.
Neichi chikonzero, isu tinopinda zviitiko zvekushongedza uye tinopa yedu yehunyanzvi chiratidzo chezvinoitika kuitika mumusika, tisingakanganwe kukuratidza nemienzaniso nemifananidzo izvo izvi zvimiro zvinogona kukuunzira iwe.
Mavara machena ane mavara ane mavara eimba yekugezera
kubudikidza Maria vazquez inoita 6 mazuva .
Wakaneta nemufananidzo weimba yako yekugezera? Kuchinja ruvara rwemajoini ematairi kunogona kukubatsira…
Makiyi ekushongedza imba yekurara yeMid-Century
kubudikidza Maria vazquez inoita 1 mwedzi .
Iyo Mid-Century style inozivikanwawo seyepakati-muzana ramakore, zvichireva nguva iyo…
Pigmented kongiri nzvimbo, tiza grey!
Concrete ipurasitiki uye zviri nyore kuumbwa zvinhu zvinopa kugadzikana kune kuvaka. Hazvina kuoma kunzwisisa kuti sei ...
Shingai nepink muimba yekugezera
Pink ndiko kutsva kwedu kutsva, kutaura kwekushongedza. Iri ruvara rusingawanzotora nzvimbo yepakati mudzimba dzedu rakanaka…
Iwo akanakisa maitiro mumakamuri ekurara aunofanira kuziva
kubudikidza Susana godoy inoita 2 mwedzi .
Kana iwe uchida kupa makamuri ako chitarisiko chitsva, hapana chakafanana nekunakidzwa nemaitiro akanakisa mumakamuri ekurara. Nekuti mu…
Magirazi egirazi anodzoka kune ikozvino
kubudikidza Maria vazquez inoita 2 mwedzi .
Chiedza chimwe chezvinhu zvakakosha zvemba. Izvo zvine hunyanzvi, kutaura zvazviri, mukutenga kwe…
Homefulness: Iyo yekushongedza maitiro auchazoda
Kunyangwe isu tichifanira kutaura nezve mafambiro mune mamwe minda senge fashoni, munyika yekushongedza…
Subway tiles, yakasarudzika yekicheni backsplash
Nhasi tine dzimwe nzira dzakawanda dzekupfekedza kicheni backsplash, zvisinei, pane imwe isingapfuure kana kupfuura…
Nzira yekubatanidza ruvara rwemasitadhi muimba yekurara
kubudikidza Maria vazquez inoita 3 mwedzi .
Muvara wemasitadhi wakanakira vose vanoda kuunza zvinyorwa zvakajeka muimba yavo yekurara. Uye zvakanyanya…
Terracotta lattice maitiro mune zvemukati
Terracotta lattices yagara iine basa rakakura munzvimbo dzedu dzekunze. Nekudaro, mumakore achangopfuura…
Mazano matatu ekupenda magonhi emukati emba yako
Magonhi emukati ari kuwana basa rinotungamirira mukushongedza kwemukati. Kwapera iwo magonhi emapuranga ane varnished ...